haino aman-jery > Journal succession > 2016-02 mpandimby ny Magazine > Pentekosta
Maro ny lohahevitra mety amin'ny toriteny Pentekosta: mitoetra ao amin'ny olona Andriamanitra, manome firaisana ara-panahy, Andriamanitra manome vaovao, Andriamanitra manoratra ny lalàny ao am-pontsika, Andriamanitra mampihavana ny olona miaraka aminy sy ny maro hafa. Ny lohahevitra iray izay nipoitra tamin'ny eritreritro momba ny fiomanana amin'ny Pentekosta amin'ity taona ity dia mifototra amin'ny zavatra nolazain'i Jesosy, inona no hataon'ny Fanahy Masina rehefa nitsangana izy ka lasa nankany an-danitra.
“Haneho ny voninahitro Izy; fa izay hotoriny aminareo dia horaisiny amiko” (Jaona 16,14 NGÜ). Misy be dia be ao amin'io fehezanteny iray io. Fantatsika fa ny Fanahy ao anatintsika dia miasa mba handresy lahatra antsika fa i Jesoa no Tompo sy Mpamonjy antsika. Fantatsika amin’ny alalan’ny fanambarana ihany koa fa i Jesoa no zokintsika izay tia antsika tsy misy fepetra ary nampihavana antsika tamin’ny Raintsika. Ny fomba iray hafa hanatanterahan’ny Fanahy izay nolazain’i Jesosy dia amin’ny alalan’ny tsindrimandry nataony momba ny fomba ahafahantsika mampandroso ny vaovao tsara eo amin’ny fifandraisantsika amin’ny hafa.
Ohatra tsara amin'izany isika rehefa mamaky momba ny nahaterahan'ny fiangonana Vaovao ao amin'ny Pentekosta, folo andro taorian'ny niakaran'i Jesosy. Nilaza tamin'ny mpianany i Jesosy mba hiandry anio sy izay hitranga amin'ity andro ity: “Ary raha teo aminy Izy, dia nandrara azy tsy hiala Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan’ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy” (Asan’ny Apostoly). 1,4).
Tamin’ny fanarahana ny toromarika nomen’i Jesosy dia afaka nijoro ho vavolombelona momba ny fiavian’ny Fanahy Masina tamin’ny heriny rehetra ny mpianatra. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2,1-13 dia voalaza momba izany sy ny fanomezana azony tamin’izany andro izany, araka ny nampanantenain’i Jesosy azy. Tamin’ny voalohany dia nisy feon’ny rivotra mahery, avy eo dia nisy lelafo mirehitra, ary avy eo dia naneho ny heriny mahagaga ny Fanahy tamin’ny fanomezana fanomezana manokana ny mpianatra hitory ny tantaran’i Jesosy sy ny filazantsara. Ny ankamaroany, angamba ny mpianatra rehetra, dia niteny tamin’ny fomba mahagaga. Talanjona sy talanjona tamin’ny tantaran’i Jesosy ny olona nandre izany satria nandre izany tamin’ny fiteniny avy tamin’ny olona heverina ho tsy nahita fianarana sy tsy namboly (Galily). Nisy tamin’ny vahoaka nanaraby ireny zava-nitranga ireny, ka nilaza fa mamo ny mpianatra. Mbola misy foana ny mpaneso toy izany ankehitriny. Tsy mamo ara-panahy ny mpianatra (ary mety ho fandikana diso ny Soratra Masina ny filazana fa mamo ara-panahy).
Hitantsika ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly ny tenin’i Petera tamin’ny vahoaka tafavory 2,14-41. Nambarany ny maha-azo itokiana io fisehoan-javatra mahagaga io izay nesorina tamin’ny fomba mahagaga ny sakana amin’ny fiteny ho famantarana fa tafaray ao amin’i Kristy ankehitriny ny olona rehetra. Ho mariky ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra sy ny faniriany hanana azy rehetra, anisan'izany ny olona avy amin'ny firenen-kafa sy ny firenena. Ny Fanahy Masina no nanao izany hafatra izany tamin’ny fitenin-drazany. Na dia ankehitriny aza, ny Fanahy Masina dia mamela ny vaovao tsaran'i Jesosy Kristy hampita amin'ny fomba izay mety sy azon'ny rehetra idirana. Izy dia mamela ny mpino tsotra hijoro ho vavolombelona momba ny hafany amin'ny fomba hanohina ny fon'ny olona izay nantsoin'Andriamanitra taminy. Amin'izany ny Fanahy Masina dia manondro ny olona ho an'i Jesosy, Tompon'izao rehetra izao, izay manome hazavana hamirapiratra amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao. Tao amin’ny Fanekem-pinoana tany Nicée tamin’ny taona 325 Chr. fanambarana fohy fotsiny no hitantsika momba ny Fanahy Masina: "Mino ny Fanahy Masina izahay". Na dia miresaka betsaka momba an’Andriamanitra ho Ray sy Zanaka aza io fanekem-pinoana io, dia tsy tokony hanatsoaka hevitra isika fa nanao tsirambina ny Fanahy Masina ireo mpanoratra ny fanekem-pinoana. Misy antony tsy mitonona anarana ny fanahy ao amin'ny Fanekem-pinoana Nicée. Nanoratra tao amin'ny iray amin'ireo bokiny ilay teolojiana Kim Fabricius fa ny Fanahy Masina dia mpikambana tsy mitonona anarana amin'ny Trinite. Amin'ny maha Fanahy Masin'ny Ray sy Zanaka azy dia tsy mitady ny voninahitry ny tenany izy fa maniry hanome voninahitra ny Zanaka izay manome voninahitra ny Ray kosa. Ny fanahy dia manao an'io, ankoatry ny zavatra hafa, rehefa manentana ny fanahy, dia mamela sy miaraka amintsika hanohy sy hanatanteraka ny iraka nampanaovin'i Jesosy antsika eo amin'ny tontolontsika ankehitriny. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no anaovan’i Jesosy ny asa manan-danja ary manasa antsika handray anjara amin’izany koa isika, ohatra. manao namana, mamporisika, manampy ary mandany fotoana miaraka amin'ny olona tahaka ny nataony (ary mbola ataony). Raha miresaka iraka dia mpandidy fo izy ary mpitsabo mpanampy anay. Raha mandray anjara amin’io asa iaraha-miasa aminy io isika, dia hahatsapa fifaliana amin’izay ataony sy hanatanteraka ny iraka nampanaovina azy ho an’ny vahoaka. ary miomana amin’ny fahatongavan’ny Fanahy Masina amin’ny andro Pentekosta. Tsy nisy na inona na inona tao amin’ny tandindon’ny koba mofo (nampiasain’ny Jiosy tamin’ny andro firavoravoana tamin’ny mofo tsy misy masirasira) afaka nitarika ny mpianatra ho amin’ny Fanahy Masina, ka nahatonga azy ireo hiteny amin’ny fiteny hafa mba hahafahan’izy ireo mitory ny vaovao tsara amin’io andro io. ary handresena ny fetran'ny fiteny. Tamin'ny andro Pentekosta dia nanao zava-baovao Andriamanitra. 2,16f.) - fahamarinana izay manan-danja lavitra sy manan-danja lavitra noho ny fahagagana amin’ny fitenenana amin’ny fiteny tsy fantatra.
Amin'ny eritreritra jiosy, ny hevitra tato anatin'ny andro vitsivitsy dia nifamatotra tamin'ny faminaniana maro tao amin'ny Testamenta Taloha momba ny fiavian'ny Mesia sy ny Fanjakan'Andriamanitra. Nilaza àry i Petera fa efa tonga ny andro vaovao. Antsointsika hoe fotoana izany ny fahasoavana sy ny fahamarinana, ny vanim-potoan'ny fiangonana na ny vanin'ny fanekena vaovao amin'ny fanahy. Hatramin'ny Pentekosta, taorian'ny nitsanganan'i Jesosy sy ny fiakaran'i Jesosy, dia niasa tamin'ny fomba vaovao teto amin'ity tontolo ity Andriamanitra: ny Pentekosta dia mbola mampahatsiahy antsika an'io fahamarinana io ankehitriny. Tsy mankalaza ny Pentekosta isika toy ny fetibe taloha amin'ny fanekena amin'Andriamanitra. Ny fankalazana ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'izany andro izany dia tsy ao anatin'ny fomban'ny fiangonana - tsy ny anaram-piangonana fotsiny ihany fa misy hafa koa.
Mankalaza ny asa fanavotan'Andriamanitra isika amin'ny andro farany, amin'ny Pentekosta, rehefa misy fanavaozana lalina kokoa ny Fanahy Masina, manavao sy manamboatra antsika ho tonga mpianany. - Ireo mpianatra izay mitondra ny vaovao tsara amin'ny teny sy ny asa, amin'ny fomba kely sy indraindray lehibe, dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitsika sy Mpanavotra antsika - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Tadidiko ny teny avy amin'i Johannes Chrysostomos. Chrysostomos dia teny grika izay midika hoe "vava volamena". Ity anaram-bosotra ity dia avy amin'ny fomba fitoriany mahafinaritra.
Hoy izy: “Fety ny fiainantsika manontolo. Rehefa nilaza i Paoly hoe: “Aoka isika hankalaza ny andro firavoravoana” (1. Korintiana 5,7f.), tsy Paska na Pentekosta no tiany holazaina. Nambarany fa fety ho an’ny kristianina ny fotoana rehetra... Satria inona no soa mbola tsy nitranga? Tonga olombelona ho anao ny Zanak’Andriamanitra. Nanafaka anao tamin’ny fahafatesana Izy ary niantso anao ho amin’ny fanjakana. Tsy nahazo zavatra tsara ve ianao - ary mbola mahazo izany ve ianao? Ny hany azon'izy ireo atao dia ny manao fety mandritra ny androm-piainany. Aza mamela na iza na iza ho lavo noho ny fahantrana, ny aretina, na ny fankahalana. Fety izany, ny zava-drehetra - mandritra ny fiainanao! ”.